Fanivaivana ny vadin’ny Filoha : Mitaky ny fampiharana ny lalàna ireo vehivavy parlemantera -
AccueilRaharaham-pirenenaFanivaivana ny vadin’ny Filoha : Mitaky ny fampiharana ny lalàna ireo vehivavy parlemantera
Fanivaivana ny vadin’ny Filoha : Mitaky ny fampiharana ny lalàna ireo vehivavy parlemantera
13/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy maty voalavo an-kibo. Izay no azo hamehezana ny vaovao navoakan’ny gazety mpiseho isan’andro, ny talata 12 desambra teo, mahakasika ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina.
Raha atao bango tokana ny voalazan’ilay lahatsoratra navoakan’ity gazety mpiseho isan’andro ity, dia tsy nisy afa-tsy fanivaivana sy fanakianana ny vadin’ny Filoham-pirenena ny nandrafitra izany lahatsoratra izany. Tsy nisy afa-tsy fanalana baraka, hatreny amin’ny lohateny lehibe ivelan’ny gazety hatrany anatiny.
Manoloana izany indrindra, namoaka ary nanao fanambarana ireo vehivavy parlemantera omaly, teny amin’ny Lapan’ny Antenimieram-pirenena, tetsy Tsimbazaza. Noho izany indrindra, dia nanambara izy ireo fa mijoro ary manameloka tanteraka ny fanalam-baraka sy fanakianana be fahatany ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina. “Manoloana ny fanalam-baraka ny vadin’ny Filoham-pirenena, izay renin’ny Malagasy rehetra, nataon’ny gazety iray mpivoaka isan’andro, mijoro izahay vehivevy parlemantera, ary manameloka tanteraka ny fanivaivana nataon’izany gazety izany”, hoy izy ireo omaly.
Ankoatra izay, dia nanambara izy ireo fa betsaka ny asa sosialy vita sy mbola hotanterahin’ny vadin’ny Filoha, Voahangy Rajaonarimampianina. Anisan’ny asa vitany teto amin’ny firenena, na mivantana izany, na an-kolaka, na amin’ny alalan’ny mpiara-miasa aminy, ary indrindra ihany koa amin’ny alalan’ireo olomboafidy, toa ireo depiote, sns, raha ny nambaran’izy ireo, ny teo amin’ny tontolon’ny fahasalaman’ny Reny sy ny Zaza, ireo fotodrafitrasa maro tsy ho voatanisa, toa ireny tranom-boky ireny sy teo amin’ny tontolon’ny fampianarana sy ny fanabeazana ny zaza malagasy, sns.
Noho izay indrindra, dia tsy hilefitra amin’ny fanalam-baraka sy ny fanivaivana toa ny navoakan’ilay gazety mpiseho isan’andro ireo vehivavy parlemantera.
Nambaran’izy ireo mantsy fa misy ny fahalalahana amin’ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara saingy tsy tokony hentina hanalam-baraka sy hanaratsiana, ary hanakianana be fahatany izany, eny na tsy mitovy fomba fijery ara-politika, na ara-piarahamonina aza.
“Ny vehivavy parlemantera dia anisany nampandany sy nandany ilay Lalàna mifehy ny serasera”, hoy izy ireo nanamafy. Noho izany, hoy hatrany ny fanambarana, dia mitaky ny fampiharana ny lalàna manan-kery izy ireo satria tany tan-dalàna i Madagasikara. Etsy andaniny, voalaza fa sarotiny amin’ny fiandrianam-pirenena ihany koa ireo vehivavy parlemantera amin’ny maha olom-boafidy azy ireo. “Mila mandroso hatrany ny Malagasy ary tsy mihemotra amin’ny asa izay efa natao sy mbola hotanterahina ho fampandrosoana an’i Madagasikara”, hoy ireo vehivavy parlemantera teny am-pamaranana.
Ravan’ny polisy, tamin’ny asabotsy 19 aogositra lasa teo, teny amin’ny fasan’ny karana ny fikasan-dratsin’ny telolahy nikasa hivarotra basy vita gasy , calibre 12 niaraka tamin’ny bala miisa dimy. Araka ny fampitam-baovao, dia polisin’ny boriborintany fahadimy, ...Tohiny
Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI) : Namoaka vola 86 tapitrisa Dolara ho an’i Madagasikara
Karatra maha matihanina OJM : Hanomboka ny fanadiovana ny tena mpanao gazety
Asa sosialy : Nitohy tany Morondava ny fizarana Kits Scolaires
Governemanta Ntsay Christian : Tsy mahafehy ny vidim-bary